मजबूत सुपर हिरो। शीर्ष 10 वर्ण
तपाईं बलियो सुपर हिरो छ जो पत्ता लगाउन प्रयास अघि, यो अवधारणा परिभाषित गर्नुपर्छ। सुपर हिरो - प्रचुर मात्रामा उहाँले साधारण राम्रो लागि विशेष प्रयोग गर्ने असाधारण क्षमता (महाशक्ति), संग endowed छ जो एक वर्ण छ। 1938 मा एक विजयोल्लास debut पछि यी व्यक्तित्व बारे prototypical कोरस कथाहरू हास्य को असीमित सेट लागि आधार भएका छन्, र पछि सिनेमा फैलियो। पछि वर्ण यो मानार्थ शीर्षक कल गर्न सुपर शक्तिहरु छैन सक्छ दावी।
क्षमता र कौशल को विविधता
यो superheroes को फोटो सधैं आफ्नो असामान्य शक्ति प्रतिबिम्बित छैन भनेर कुनै गोप्य छ। केही प्रमुख व्यक्तित्व यो पनि छैन, तर मा विज्ञान, कौशल र मार्शल आर्ट, सबै भन्दा glaring उदाहरण शीर्ष पुग्न - प्रश्न र नौकर। ग्रीन लालटेन र फलाम मानिस - केही विशेष हतियार वा सुट मदत। स्पाइडरम्यान (वेब), आश्चर्य नारी (कंगन), वोल्भेरिन (नंग्रा), थोर (हथौडा), Daredevil (cudgel) - धेरै मान्छे सहयोगी उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्। मजबूत सुपर हिरो निश्चित असम्भव छ जो निर्धारण गर्न त। सामान्य मात्र कुरा - प्रत्येक वर्ण एक लगातार छ नैतिक सिद्धान्तहरू र बिना हिचकिचाहट आफ्नो जीवन बलिदान गर्न तयार छन्। अक्षरहरू को सबै भन्दा स्वतन्त्र काम गर्छ, तर त्यहाँ समूह र superkomanda को असीमित संख्या हो: न्याय लीग, Avengers, एक्स-पुरुष, उत्कृष्ट चार र अरूलाई। superheroes को टोली - एक विस्तृत दर्शक लागि चुम्बक - फिल्म, यस्तो फिलिमहरु लागि सही फेला।
चलचित्रहरू गर्न हास्य देखि
अमेरिकी हास्य लागि, तर पनि सिनेमा लागि मात्र होइन एक उर्वर भूमि - अक्सर superheroes हास्य वर्ण, र आफ्नो जीवन र साहसिक बारेमा कथाहरू छन्। र तस्बिर एक सभ्य बजेट, सफलता र बक्समा एक उच्च मूल्याङ्कन संग सुसज्जित छ भने यो विशिष्ट प्रदान। superheroes बारेमा चलचित्र सधैं केही बन्न पंथ अपेक्षा र लोकप्रिय र sequels, prequels र विभिन्न शाखा को एक अविश्वसनीय नम्बरमा वृद्धि दिने, धेरै वर्ष को लागि आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाउनु छैन। सबैभन्दा तिनीहरूलाई बीच प्रसिद्ध छन्: "कोरस। न्याय दिन, "" कोरस लाभ, "" काले नाइट। को "" लेजेन्ड, "" नौकर, "" हरे लालटेन, "फलाम मानिस," "उत्कृष्ट चार," स्पाइडरम्यान, "" एक्स-पुरुष "र यति मा। डी को फिर्ती माग र कार्टुन superheroes, सबै भन्दा बीचमा सफल बारे मा मान्नु नगर्नुहोस् जो "नौकर," "बेन 10," "फलाम मानिस," "किम एक प्लस संग", "न्याय लीग," "द Avengers," "स्पाइडरम्यान", "Helbich" र अरूलाई रूपमा मानिन्छ गर्नुपर्छ। आवश्यकता र उज्ज्वल एनिमेटेड फिल्म "द Incredibles," superhumans को सम्पूर्ण परिवार को कहानी बताएको गर्न आदर तिर्न र सारा कहानी परम्परागत सेट समावेश जो एक आगोको सुपर हिरो कार्य, छ: सुपर खलनायक र आफ्नो henchmen, chases, विस्फोट, डबल जीवन र शहर भन्दा सबै वैश्विक खतरा संग लडाई । superheroes बारेमा चलचित्र, यद्यपि ती सबै भन्दा कल्पना र साहसिक दुवै मा अवस्थित छन्, कहिलेकाहीं अझै पनि अन्य विधाहरू मा जाने व्यवस्थापन गर्नुहोस्। "द Punisher," "नौकर" हरर चलचित्रहरू - - "चयन फिलिमहरु आपराधिक चित्रहरु सदृश स्पेक्ट्रम", "Helbich", "Spawn", र धेरै धेरै विज्ञान कल्पना आकर्षित छन् - "उत्कृष्ट चार," "एक्स-पुरुष", "ग्रीन लालटिन "।
निष्पक्षता मा मजबूत सुपर हिरो छ जो बारेमा प्रश्न उठाउँदै, कि उल्लेख गर्नुपर्छ, तपाईंलाई अमेरिकी मूलका मात्र होइन candidature विचार गर्न आवश्यक छ। ड्रागन बल श्रृंखला देखि Goku - - वा फिलिपिनो केटी Darna एक परिपक्व र खतरनाक महिला योद्धा मा परिवर्तित भइरहेको सक्षम यो रैंक मा को कोरस जापानी बराबर दावी गर्न सक्नुहुन्छ। खैर, त्यहाँ पनि एउटा सुविधा-लम्बाइको गति तस्वीर, 1951 मा फिर्ता जारी छ।
ब्रिटिश वर्ण एकदम मूल हो - जादुगर र जेनिथ।
फ्रान्सेली कुस्ती भएन र अमेरिकी समकक्षों मा आफ्नै तस्बिरहरू निर्माण - Saltarella, Crabbe र माइक्रो एकदम मानक हो, तर MetaMorph-विदेशी Vampus र फोटोनिक्स यसको विशिष्टताको द्वारा आकर्षित छन्।
सुपर Commando Dhruva, Doga र Nagradzh हिन्दू को वजन बोक्न: पनि भारत आफ्नै वर्ण (पौराणिक कथाहरु सन्तान) छ नैतिक मान। सोही, भारतीय सिनेमा supermen को रोमांचक बारेमा टेप एक जोडी पनि जारी गरेको छ - "शिव र Krrish", "श्री भारत"।
यी अन्तर्राष्ट्रिय superheroes जसको सूची अनन्त छ छन्।
हाम्रो मातृभूमि मा नायक हुन्
रूसी वर्ण मन छैन अलेक्जेन्डर Voitinsky र द्वारा निर्देशित अमेरिकी मानक, फिल्म "Swordsman" (2006) द्वारा प्रमाणित Filippa Yankovskogo र "काला चट्याङ्ग" (2009) दिमित्री Kiselev। उहाँले एक तेज तरवार को पाम देखि, आवश्यक भएमा ड्र, र आफ्नो कार्यहरूको प्रेरणा बदला को भावना निर्धारण - मुख्य पात्र को पहिलो तस्वीर मा, अलेक्जेन्डर अद्वितीय क्षमता छ।
दोस्रो फिल्म को हिरो - dima पुरानो "वोल्गा" आफ्नो पिता देखि, त्यो उनको असाधारण सुविधाहरू discovers र साहसपूर्वक आकाश को क्रिसमस राजधानी मा खलनायक संग लडाई मा संलग्न पाए।
एक आधुनिक घरेलू कार्टून? तिनीहरूलाई मा Superheroes - रूसी नायक! "Alyosha Popovich Tugarin सर्पले", "Dobrynya Nikitich र ड्रैगन", "इल्या Muromets र बुलबुल डाकू" - सबै राम्रो र खराब, र प्रत्येक चित्रकला को मुख्य वर्ण शक्ति र वीर (superhuman) silushkoy संग endowed छन् बीच संघर्ष बारेमा।
तपाईं चिरपरिचित वर्ण को स्मृति सूची प्रयास भने, यो धेरै समय लाग्नेछ, र पर्याप्त बलियो सुपर हिरो कठिन छ जसले निर्धारण गर्न। चाँदी सर्फ़र, वोल्भेरिन, डाक्टर मैनहट्टन, कोरस, थोर, दानव, स्पाइडरम्यान - प्रत्येक जो पक्ष बावजुद आकलन गर्न, सबै भन्दा शक्तिशाली रूपमा छलफल गर्न सकिन्छ। तैपनि, तल शीर्ष 10 मजबूत दावेदार समावेश प्रस्तुत।
दानव, उर्फ डा Bryus Benner। एक हुनुमा दुई व्यक्ति। एक महत वैज्ञानिक, जीव, ईन्जिनियरिङ्, र गामा विकिरण मा विशेषज्ञता। अन्य - हरियो राक्षस, रिस, थप शक्तिशाली भन्दा बढी छ। उहाँले अनन्त शारीरिक बल छ। शत्रु को blows देखि बलियो र थप शक्तिशाली हुन्छ जो कसरी हटाउन? को कथाहरू मध्ये उहाँले पनि झुकाव स्थिर गर्न प्रयास, समय र ठाउँ सम्पूर्ण संरचना आयोजित। वयस्क unsinkable, यो दबाव को प्रभाव बिना कुनै पनि गहिराई मा फ्लोट गर्न सक्षम छ। यो विष गर्न असम्भव छ, संक्रमण संक्रमित। Ultrafast रिकभरी दानव invulnerable र impenetrable छाला शारीरिक वा जादुई प्रभाव प्रतिक्रिया गर्दैन गर्छ। यसलाई छिटो कठिन छ, छैन बुढेसकालको विषय हो। असीमित शक्ति र बुद्धि भन्दा शक्तिशाली सुपर हिरो को भूमिका को लागि हरियो राक्षस आदर्श उम्मेदवार बनाउन। यो बेला ब्रूस, यो मार्न सक्नुहुन्छ किनभने अद्वितीय प्राणीहरू मात्र कमजोरी, दोस्रो "म" को रूपमा मानिन्छ गर्नुपर्छ। चलचित्र हेरेपछि यो कथन हुनत "द Avengers" पनि सम्भव किनभने ब्यानर आत्महत्या पूरा गर्न प्रयास गर्दा, आफ्नो Alter अहम् (दानव), यो अनुमति छैन, प्रश्न छ।
छवि माथि गर्नाले, superheroes को छवि, सम्भवत ध्यान यस भुक्तानी गर्नेछ अक्षर। फ्लैश विकास गर्न सक्षम छ प्रकाश को गति, , आश्चर्यजनक गति कदम चाल्न लाग्छ सार्न, पर्खाल पास - र सबै छैन। उहाँले सबै आयाम समय र आन्दोलन को विकृति विषय हो। आफ्नो कमजोरी थाहा छैन केहि, त्यसैले तिनीहरू पत्ता, यो एक सुपर हिरो फसाउन आवश्यक छ, र यो असम्भव छ।
उहाँले रिचर्ड सवार - सुपरसोनिक गति, invulnerable मा उड गर्न सक्षम छ जो intergalactic प्रहरी अधिकारी को हेड, ऊर्जा थक्के शुट, सुधारना गर्ने क्षमता छ र ksadarianskomu मनमा स्थायी पहुँच छ। आफ्नो कमजोरी - predictability, किनभने यो विशेष व्यवस्था भित्र संचालित।
नर्स भगवान शरीरका मा। पूर्ण invulnerable, अविश्वसनीय, कठिन बेहद बलियो छ। उहाँले बिजुली कारण, उड गर्न सक्षम छ र सबै भन्दा शक्तिशाली हतियार एक वाहेक छ - थोर को हथौडा। कमजोरी यो समस्या कल, तर तपाईं परमेश्वरले आफ्नो भगवान मात्र बराबर सामना गर्न सक्नुहुन्छ।
एक वैज्ञानिक जोनाथन Osterman को काम रिएक्टर भित्र हुन्छ र survives, तर डा मैनहट्टन परिवर्तन छ - नायक अणु स्तर मा कुनै पनि कुरा व्यवस्थापन गर्न, अरूको विचार पढ्न उड गर्ने क्षमता, छ। अब उहाँले सबै समय अंक मा एक साथ हुन सक्छ, अमर र invulnerable छ। आफ्नो उत्साह tachyon संग "चिसो" गर्न सक्नुहुन्छ।
एक भारी शारीरिक बल, sverhvynoslivost, invulnerability, fearlessness: सही जो superhuman शक्तिहरु दिन्छ यो एक शैतानिक परिवर्तन दिन्छ कि एक सुपर हिरो वर्ण, स्थिति दावी गर्न। रहस्यमय ऊर्जा तीव्र पुनर्जनन, र अन्य मानिसहरूको शक्तिहरु र दण्डात्मक आँखा एक शक्तिशाली हतियार भूत सवार छन् अवशोषित गर्ने क्षमता दिन्छ।
प्राणको अन्धकारको भुमरीमा lurking किनभने सबैभन्दा शक्तिशाली वर्ण को एक, तर धेरै ध्यान दिएर असाधारण शक्ति उठाउँछ। आफ्नो शक्ति एक लाख suns को विस्फोट बराबर छ, यो 100 भन्दा बढी टन उठाउनु गर्न सक्षम छ। ईश्वरीय धीरज र invulnerability बराबर छैनन्। सुपर हिरो आफूलाई पुनर्जीवित गर्न सक्नुहुन्छ। गति उडान संतरी प्रकाश को गति नाघ्यो, र दृष्टि र श्रवण टाढा मानव कल्पना बाहिर छन्।
अमेरिकी संस्कृति चिह्न - कोरस - invulnerable (आफ्नो शरीर superalloy), nonhuman शक्ति विशाल सार्दा वस्तुहरु supervynosliv प्रहार गर्न सक्षम छ। जोडी यो पुनर्जनन गर्न, क्षमता उड गर्न (र पृथ्वी स्पेस र वातावरण मा) र overspeed उत्प्रेरित गर्ने क्षमता, एक्स-रे दृष्टि छ, माथि अति र infrasound छनोट गर्न सक्नुहुन्छ। वर्ण अविश्वसनीय मानसिक क्षमता, प्लस सबै उहाँले Hypnotized छ।
superheroes को तस्बिरहरू को कुनै पनि स्पाइडरम्यान को छवि बिना गर्न सक्नुहुन्न। ठूलो भौतिक बल, सरासर पर्खालहरु चढ्नु क्षमता, छैटौं अर्थमा, ब्यालेन्स, अविश्वसनीय चपलता र गति को सिद्ध अर्थमा: सामान्य विद्यार्थी पत्रुस Parker एक रेडियोधर्मी माकुरा द्वारा bitten भएपछि superpowers सम्पूर्ण सेट हुन्छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कौशल - transcends कि जीवन (माकुरा) वेब पाम को इन्जेक्शन को गढ एक लाख पटक हो।
invisibility, सुपरसोनिक गति मा उडान, पोर्टल, एक्स-रे दृष्टि, रोग, टेलिप्याथी Comment, सम्मोहन, भौतिक अवस्थामा परिवर्तन को निदान मार्फत ग्यालेक्सी मार्फत सार्दा: आकाशगंगा प्रत्येक अभिभाबकहरुको शक्ति को घन्टी छ, यो यसको मालिक असीमित सम्भावनाहरू र क्षमता दिन्छ। पनि हरियो लालटेन घाउ, खुला invisibility र ठूलो भौतिक बल निको गर्ने क्षमता छ।
समाज एक सुपर हिरो बिना - आशा बिना समाज
तिनीहरू यहाँ, superheroes छन् ... यो सूची exhaustive छैन। तिनीहरूले सधैं गरिएको छ र पालना गर्न एउटा उदाहरण सेट कि कारण को लागि, मानव समाज को लागि आवश्यक हुनेछ। मान्छे ज्यादातर स्वार्थी, सबैलाई कहिलेकाहीं पनि अरूको लागत, आफूलाई मात्र सुरक्षा गर्न प्रयास गरिएको छ छन्। हामीलाई अघि सुपर हिरो को छविमा स्वेच्छाले साधारण मुक्ति वा असल आफूलाई बलिदान गर्ने एक देखिन्छ। किन यी वर्ण लोकप्रिय छन् र सबै समय मा मांग मा, किन, आफ्नो शोषण चकित कार्यहरूको प्रसन्न र पालना गर्न राम्रो उदाहरण सेवा चलचित्र र कार्टून, superheroes गोली हुनेछ भन्ने छ।
फिल्म "म फर्केर": समीक्षा, अभिनेता र भूमिकाको, फिल्म चालक दल
"द हराए साम्राज्य": फिलिम को अभिनेता
शक्ति र प्रकृति को उतेजना मूल्याङ्कन। देखेर लायक छन् जो बाढी र tsunamis बारेमा फिलिम,
फिल्म "सेतो BIM काला कान" को अभिनेता। फिल्म को इतिहास
"श्री बीन": सबै चलचित्रहरू। "श्री बीन": श्रृंखला सूची
खरीद एक घर: चरण निर्देशनहरूको द्वारा कदम। कसरी किन्ने र मास्को मा एक घर व्यवस्था?
यो खतरा - यो के हो?
अचम्मको उपकरण - मानव श्वसन प्रणाली
एउटा मुद्दा रूपमा काम पुस्तकमा एक सम्मिलित? काम पुस्तकमा एक सम्मिलित: नमूना
अझै पनि जीवन चित्रकला: प्रकार र वर्णन
को स्मोकहाउस तातो तरिकामा धूम्रपान माछा सञ्चालन गर्न कसरी सल्लाह
पूर्व अतिथि - चिनियाँ बन्दागोभी
कार्यशाला: कसरी कागज बाहिर माउस बनाउन